धेरै Housewives तिनीहरूले म बालुवा, खैरो वा बेज रंग टाढा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेर तटस्थ रंग मा थकित भान्सा छन् भन्छन्। तपाईंको भान्सा को भित्री मा फिरोजा प्रयोग - हामी मूल समाधान प्रस्ताव। आश्वासन आराम: तपाईं गैर-तुच्छ र स्टाइलिश डिजाइन प्राप्त हुनेछ।
फिरोजा रंग: मनोवैज्ञानिक अनुसार
रंग फिरोजा को एक किसिम को एकदम एक रोचक मनोवैज्ञानिक विशेषताहरु छ। यो हरियो रंग एक bluish रङ्ग छ जो अर्ध-अनमोल पत्थर, को सम्मान मा यसको नाम पायो। प्राचीन समयमा, यो फिरोजा जादुई गुण छ विश्वास थियो। साथै, टोन को समान छ एक्वा रंग, जो पानी र शैवाल को interwoven रंग हो। फिरोजा को रंग को एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या दिने, हरियो र नीलो - सँगै संयुक्त यस दुई रंग संयोजन गर्न।
भान्सा भित्री मा फिरोजा रंग, तनाव, थकान, तनाव relieves मस्तिष्क गतिविधि बढावा। उहाँले आध्यात्मिक शुद्धता को एक प्रतीक हो। तर केवल अवस्था मा हरियो प्रभुत्व। छ पक्कै पनि सबै फेंग शुई को शिक्षा लक्जरी, धन को एक प्रतीक र अधिक महत्वपूर्ण कुरा, सद्भाव रूपमा रंग व्याख्या भनेर थाह छ। उहाँले पूर्वी क्षेत्र मा काम गर्छ।
फेंग शुई चिकित्सकहरु को connoisseurs तपाईं भान्सा पर्खाल पूर्वी भाग मा रंग, वा कम से कम यदि expressive सामान फिरोजा थप्न, तपाईं वित्तीय स्थिति सुधार हुनेछ, र तपाईं आफू र संसारभरि सबैलाई अनुरूप बस्नेछन् भन्छन्। विवरण, को पाठ्यक्रम, विवादास्पद, तर सबैलाई यो वास्तविकता मा काम गर्दछ कसरी देख्न सक्छौं।
फिरोजा मा भान्सा
म यसको overuse को रंग को प्रशंसक चेतावनी चाहन्छ। को भित्री हरियो र नीलो रंग संग Awash छ, यो असहज र चिसो हुनेछ। फर्नीचर, तल्ला वा पर्खाल - तपाईं फिरोजा को रंग चयन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। या शायद यो उज्ज्वल महत्तव को भित्री थप्दा, स्थान प्रयोग गर्न राम्रो छ?
प्रायजसो, फिरोजा भान्सा फर्नीचर ठ्याक्कै यी रंग बनेको छ। minimalism, देश, नमस्ते-प्रविधि, भू-मध्य शैली - यो कुनै पनि शैली निर्देशनहरू संग मधुर स्वर Blends। उदाहरणका लागि, भान्सा, minimalism को शैली मा गरे, भान्सा फिरोजा laconic फारम चिसो गामुट बाँकी भित्री घेरिएको गर्न सकिन्छ। भान्सा, देश-शैली फर्नीचर मा उज्ज्वल टाल्ने एक सिद्ध पूरक।
फिरोजा रंग मा भान्सा प्यास्टेल-रंग पर्खालहरु को एक पृष्ठभूमि मा महान हुनेछ। यी समावेश गर्नुपर्छ हाथीदांत, Milky, फिक्का पहेंलो, हल्का खैरो, प्रकाश गुलाबी, मलाईदार। फिरोजा भान्सा जरूरी भित्री यस्तो टन सुसज्जित गर्न छैन।
यो रंग सफलतापूर्वक पर्खालहरु (whitewashing, वालपेपर, प्यानल) को सजावट लागि प्रयोग गरिएको छ। यस मामला मा, फर्नीचर को सेट फरक मात्रा चयन गर्न राम्रो छ। हामी बिर्सन हुँदैन छैन फिरोजा कि - रंग एकदम उज्ज्वल छ, त्यसैले तपाईं यसलाई एक overabundance हुँदैन। यसलाई थप यो काम सतह माथि, उदाहरणका लागि, एक पर्खाल मा प्रयोग गर्न expedient छ।
फिरोजा रंग मा भान्सा काठ फर्श र प्राकृतिक रंग सही देखिन्छ। तपाईं गाढा laminate प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जैविक विकल्प उच्च गुणस्तरीय तल्ला टाइल्स प्रयोग गर्न सकिँदैन। सुंदरता र व्यावहारिकता - यो मामला मा परिसर मालिक थप महत्त्वपूर्ण छ के आफूलाई लागि निर्धारण हुनुपर्छ।
बरफ-सेतो छत, बहु हुन सक्छ जो, सबै भन्दा यस्तो व्यञ्जन लागि उपयुक्त। उहाँले गहिरो फिरोजा जोड हुनेछ। समाप्त गर्न, तपाईं कुनै पनि आधुनिक सामाग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, मा फिरोजा भान्सा देश शैली plastered र हिउँ-सेतो चित्रित छत चित्रित presupposes। तपाईं एक भू-मध्य शैली रुचि भने, यो Drywall को शीर्ष गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। यो राम्रो स्थान रोशनी संग स्ट्याक हुन सक्छ। उच्च-टेक वा minimalism को Admirers सेतो (मैट वा चमकदार) सानो फिरोजा महत्तव रहेको सँग तन्काउनुहोस् छत लागि रोज्न सक्नुहुन्छ।
ठीक रंग संयोजन गर्न (र तपाईं फिरोजा भान्सा रुचि राख्नुहुन्छ भने त आवश्यक छ गर्न), तपाईंले दुई वा बढी रंग को संयोजन केही नियमहरू जान्नु आवश्यक छ।
यो केवल सियान रंग प्रयोग गरेर भान्सा को आरामदायक र आरामदायक भित्री सिर्जना गर्न धेरै गाह्रो छ। यो चिसो टोन एक साथी रंग आवश्यक छ। व्यावसायिक डिजाइनर फिरोजा वा फर्नीचर को, वा पर्खाल को डिजाइन मा FACADES मा प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। या त स्टाइलिश सामान निर्दिष्ट रंग प्रयोग गर्नुहोस्।
हामी पहिले देखि नै यो जस्तो थियो, यो टोन को वातावरण मा निर्भर गर्दछ ताकि, फिरोजा, दुई रंग को एक फ्युजन छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा कुरा गरेका छन्। यसलाई पूर्णतया यो रंग आसन्न छ कि छैन भनेर आधारमा यसको रंग परिवर्तन गर्ने एक छेपारो रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। यो नीलो छ भने, त्यसपछि फिरोजा एक bluish रङ्ग प्राप्त। यदि उहाँलाई अर्को रंग हरियो हुनेछ नै हुन्छ। पक्कै, यो अचम्मको रंग राम्रो अन्य रंग संग जान्छ। हामी तपाईंलाई सबैभन्दा रोचक संयोजन प्रस्तुत तल।
सेतो र फिरोजा भान्सा
यो विकल्प सुरक्षित एक क्लासिक सकिन्छ। उहाँले विकल्प उपलब्ध संयोजन बीच एक रोजाइको रूपमा पहिचान गरिएको छ। यस्तो जीवन्त विपरीत एकदम Nautical शैली सजाया भान्सा, वा minimalism, नमस्ते-टेक को शैली मा उपयुक्त छ। को भित्री फर्नीचर लागि नीलो र सेतो धर्काहरू मा तौलिया वा सजावटी तकियों संग पूरक गर्न सकिन्छ।
खैरो र फिरोजा भान्सा
यस मामला मा, यसको विपरीत छैन रूपमा अघिल्लो embodiment जस्तै उज्यालो छ। खैरो र फिरोजा संयोजन आफ्नो घर सजावट conviviality र परिष्कृत शान गर्न ल्याउनेछ। विशेष गरी प्रभावकारी खैरो पर्खाल को एक पृष्ठभूमि मा फिरोजा फर्नीचर देखिन्छ।
न्यानो वातावरण, शान्त र सान्त्वना रुचि गर्नेहरूका लागि यो फिरोजा भान्सा। यो संयोजन सामान्य छ। यसलाई फर्नीचर FACADES र खैरो तल्ला हुन सक्छ। यो यस्तो पहेंलो रूपमा यी दुई रंग, पूरक गर्न पूर्ण स्वीकार्य छ। यसलाई भान्सा एप्रन को निर्माण मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुन्तला, गुलाबी, ईटा - साथै, फिरोजा भान्सा एक मलाईदार वा Milky, र थप उज्यालो रंग संग पूरक गर्न सकिन्छ।
एक साथी रंग छनौट गर्दा, हामी तपाईंको भान्सा को लेआउट बारेमा भूल गर्न सक्दैन। यदि यसको विन्डोजले अनुज्ञेय चिसो टोन को भित्री मा दक्षिण वा पूर्व पक्ष मा अवस्थित छ। खिडकियों उत्तर सामना भने, यो कोठा थप्न आवश्यक न्यानो रंग।
भित्री विभिन्न शैलीहरू मा फिरोजा को प्रयोग: क्लासिक
Solemnity र coldness राजमहलको हल को आंतरिक मा निहित, प्रभावकारी फिरोजा भान्सा डिजाइनमा देखिन्छ। ज्यामितीय पैटर्न, डिजाइन र फर्नीचर को सतह मा Monograms र पर्खालको धेरै मेल खान्छ हेर्न। पित्तले र सुन चढाना, जो ढोका ह्यान्डलहरू लागू गर्न सकिन्छ को क्लासिक शैली जोड। यसलाई उपयुक्त र सजावटी छ।
उज्ज्वल रंग द्वारा विशेषता को "गाउँ" शैली को सबै भन्दा लागि। यो सक्रियतासाथ फिरोजा रंग प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। असबाबवाला फर्नीचर, पर्दे, दीपक फिरोजा विभिन्न रंग हुन सक्छ।
परिष्कृत Shabby ठाठ, चिकना आधुनिकतावादी वा आकर्षक उच्च प्रविधी यो रंग प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। Shabby फैशनेबल फिरोजा एक जलेको छाया जस्तै सबैभन्दा फिक्का लागि सुट। कला नोव्यू पहेंलो, रातो, चम्किलो हरियो संग संयोजन मा उज्ज्वल रंग फिट। क्रोमियम धातु संग संयोजन मा फिरोजा र उच्च-टेक शैली मा भान्सा लागि आदर्श छ।
यसलाई गरिएका रूपमा थुप्रै रूसी आज मा सामान्य प्यास्टेल टन त्यागेर भान्सा को डिजाइन। फिरोजा मा परिसर गर्ने खरिद मालिकको अनुसार, तिनीहरूले विकल्प पछुताउनु छैन। सेतो र फिरोजा भान्सा, तपाईं समीक्षा, रूस बीचमा विशेष गरी लोकप्रिय विश्वास भने। तिनीहरूले धेरै सुरुचिपूर्ण हो, सही मुड सिर्जना गर्नुहोस्। धेरै मानिसहरू कि खैरो र फिरोजा रंग मा धेरै स्टाइलिश भान्सा देखिन्छ लाग्छ।
Multivarka Lumme लू-1446: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों
चिप्समा नास्ता के हो?
पाक कौशल को रहस्य: छाला गर्न पाइक संग रूपमा
रोलर जुनिपर: प्रयोग र आवेदन समीक्षा
"अक्षको पर्व" - कुनै पनि खेती उपयोगीको लागि मजा, रोचक,
जीन्समा कसरी टक गर्ने?
औषधि "Theraflu LAR"। Pharmacological कार्य, सङ्केत गर्छ र contraindications
बिजुली - यो के हो? विकास र रूसी बिजुली को समस्या
Rhubarb के हो? प्रजातिहरू, रोपण र हेरविचार